Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 1 of 7 Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 2 of 7 Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 3 of 7 Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 4 of 7
Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 5 of 7 Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 6 of 7 Erwin Rommel in the SdKfz. 250/3 command vehicle 'Greif', North Africa, 1942, photo 7 of 7